Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Thomas Lemar Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Star kasị mara aha; 'Mr Versatile'. Ụmụaka Thomas Lemar Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Ugbu a na-enweghị, Thomas Lemar bụ otu n'ime ihe kachasị emetụ n'ahụ na windo mbufe 2017. Ugbu a, ka amalite.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu: Ndụ mbido
Thomas Lemar a mụrụ na 12th November nke 1995 na àgwàetiti Carribean Baie-Mahault, Guadeloupe, nke bụ ókèala France. Guadeloupe bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ maka iwetara talent football na France. Aha mara aha dika Thierry Henry na Alexandre Lacazette ha niile nwere Ihe Nketa ha site na Island. Nne na nna ha niile kwagara Farani na-ahapụ àgwàetiti yiri ntuba nke French West Indies.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ndụ mmekọrịta
N'oge ederede, Thomas Lemar ekpughewo mmekọrịta ya na ya ịbụ Single. Nke a pụtara na enweghi mmekọrịta a kwadoro ma ọ bụ Ex-girlfriends or ex-wives. O nweghi umu obula.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Style nke Play
Lemar bụ onye na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ na-egwu egwu na nku abụọ ma site na etiti ma na-arụ ọrụ n'efu. Ọ bụ onye ukwu na-ahapụ ụkwụ ya, mana ọ ga-ejikwa aka nri ya. A maara ya maka nkà ya dribbling ọma ya, ike na-agabiga agafe na kicks n'efu. O kwuola na ọ na-achọ ka ya na ndị òtù ọlụlụ na-ejikọta ya, kama ịnara ndị agbachitere: "Ana m agbalị izere duels ma lekwasị anya na m ga-agafe ma na-emegharị ihe dị ka o kwere mee."Ọ na-agbalịkarị ịgọta site na ogologo oge wee gbata ihe mgbaru ọsọ 14 na 55 ihu na 2016-17 oge ma nwee 17 na-enyere aka.
Ọ na-eji isi ya eme ihe, ụkwụ aka ekpe ya nwekwara ike ịme anwansi - ọ dịghị mgbe ọ na-ele anya na ọ ga-eme ka ihe dị egwu ma ọ bụ ezie na o nwere ike ịkụ egwu egwuregwu site na ịgba ụra, o nwere nnukwu ihe ọ na-eji eme ihe ndị mmegide ahụ.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ọrụ na Nchịkọta
Ngwaahịa nke usoro ndị na-eto eto Caen, Lemar mere mmalite mbụ ya na mmalite egwuregwu nke 2013 / 14 n'oge August 2013.
Ọ gara n'ihu ime ka 31 pụta ìhè maka SMC, tupu ya adọta mmasị si na Europe dum - ọ nọ n'okpuru Chelsea na-enyefe ntụgharị okwu ma jikọta ya na Liverpool, Lyon na Bordeaux, ma ọ kwụsịrị ịga Monaco maka £ 3.4 nde na 2015.
Ọ nọchitere France na ọkwa ọ bụla site na U17 ruo U21 wee mee ka ndị isi nhazi ụwa na 2016 megide ya. Ivory Coast.
Ebe ọ bụ na ị si na Caen, elekere 21 na-egwuri egwu n'ọtụtụ ọnọdụ ebe etiti.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ligue 1 Trophy
Ma eleghị anya, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko na Bernardo Silva nwere ike inweta nnukwu otuto sitere n'aka ndị na-ekiri ya. Ma arụ ọrụ Lemar na Monaco na-emeri Ligue 1 ma ruo nchịkọta Njikọ Njikọ na njedebe ikpeazụ agaghị enwe ike elelị.
Ọ na-edu ọgbakọ ya iji merie ọgbọ French oge ikpeazụ (2017 / 2017) wee ruo na Njedebe Njikọ nke Njikọ, na-akụda Manchester City na Borussia Dortmund mmasị n'ụzọ.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ike 1, Ọtụtụ Ike
Ọ bụ ezie na ọ na-egwuri egwu, ọ bụghị onye ọ bụla a gọziri agọzi dị ka ndị òtù ya Benjamin Mendy na Mbappé, ma ọ dịghị ya mkpa. Lemar na-ahọrọ iji jikọọ ma kpọọ otu ugboro abụọ ma jiri ije na egwu nke nnyefe ya imepe ohere.
Ọ dịghị onye Monaco na-egwuri egwu dị iche iche n'egwuregwu ọ bụla na 2016 / 2017 oge (2.2) karịa Lemar, o mekwara ọtụtụ crosses (1.4) karịa nke ọ bụla n'ime ndị òtù ọlụlụ ya. Na ndị na-egwuri egwu mgbe niile na Ligue 1, naanị nhọrọ ịhọrọ Radamel Falcao (2.8), Valere Germain (1.8) na Mbappe (1.8) nwere ihe ndị ọzọ na-agba ọsọ maka egwuregwu karịa Lemar's 1.7.
Cheta, ọ bụ 21 dị afọ nyere aka kụtuo Tottenham nke Njikọ Njikọ a.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Nna Ya, Ihe Na-eme Ka E Nwee Ụkwụ
Dabere na GFFN, Nna Lemar chọrọ ka ọ nọrọ na Monaco, ọbụnakwa bịanye aka na ndọtị nke mere na 21 dị afọ nwere ohere kachasị mma iji nweta nchịkọta maka squad nke France maka World Cup na 2018.
Akwukwo a kesara site na 2017 oge mbufe nyefe. O kwuru na Edwige chọrọ ka nwa ya 'jụ' Arsenal. Dị ka ọ dị n'oge ederede, Arsenal ekwuwo na ọ laghachiri na Monaco na ntinye £ 40m maka onye uwe ojii mgbe ọ na-enye ihe £ 31m ma mesịa yie £ 35m akaghachi azụ. Otú ọ dị, a na-ekwu na ha ga-adị njikere ịga £ 50m.
Ajụjụ bụ; Ndi Arsene Wenger ga - agba ụra £ 50m - karịa Mesut Ozil - maka onye ọkpụkpọ nke o mere atụmatụ ịnọgide na bench maka ọtụtụ oge?
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ntak Liverpool Họrọ Salah kama Lemar
Ee, ha nwere mmasị n'ezie Salah, ma ha achọpụtala na ọ na-arụ ọrụ kacha mma ọ na-arụ na mbuso agha ahụ nanị mgbe ọ nwere ohere, n'ihi na ọ na-agba ọsọ. O nweghị ihe a pụrụ ịdabere na ya dika Lemar. Ha chere na ọ ga-aba uru n'ịkụda bọs.
Isi ihe mere ha anaghị aga maka ya bụ na ọ dị oké ọnụ. Ha chere na Monaco agaghị ere ya na ọnụ ala. Ha na-akasi onwe ha obi site n'ibibi Lemar ka ọ ga-aka mma na bọl karịa ya. Ha kwenyere na ha nwere oke nke Lallana, Coutinho, Gini na Firmino bụ ndị dị ukwuu na bọl ahụ.
Ihe dị ha mkpa bụ onye ọkpụkpọ ọzọ nwere ike ịmepụ bọl na azụ. Salah bụ onye ahụ. Lemar, ha ka mma karịa ka ọ bụ LW.
Thomas Lemar Child Story Plus Na-adịghị agbagha akụkọ ndụ Eziokwu:Ihe ndị ọzọ mara
Ihe nlereanya nke Lemar bụ Andres Iniesta mgbe nile, ọ na-egosipụtakwa. Ọ bụ ezie na nkà ịgba ụra ya dị oke mma, ọ naghị eche banyere ịkwado ndị na-agbachitere ya, kama ọ na-etinye aka na egwu egwuregwu.